नेताहरुकै कारण मुलकको स्वाधिनता धरापमा - Gokarna News from Nepal
नेताहरुकै कारण मुलकको स्वाधिनता धरापमा
मङ्गलबार, पुष ०८, २०७६ by गोकर्ण न्युज
स्थानीय,प्रदेश र संद्यिय सभा निर्वाचनमा पनि नागरिकहरुले भिजन नभएका पुराना सोच भएका राजनीतिक पार्टी दलका नेताहरु र पुरानै शक्तिहरुलाई नै रोजे । नेपाली नागरिकहरुमा आजसम्म पनि सचेतना र जनचेतना आएन् । यसको दुष्परिणाम वा भारी मूल्य हामी नेपाली नागरिकहरुले नराम्रो संग चुकाउनु पर्ने र व्यहोर्नु पर्ने दिनहरु आउने छ । हाम्रो मुलुकमा विकास र जनहितका लागी नयाँ–नयाँ सोच, विचार, योजना र भिजन भएका नेताहरु नै भइ दिएनन् । यो हामी नेपाली नागरिकहरुका लागी दुर्भाग्य हो ।
विक्रम सम्वत् २०६२÷०६३ साल पछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद र राजनितिक दलका नेताहरुको कारण मुलकको स्वाधिनता धरापमा परेको र राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग भईरहेको छ । प्रधानमन्त्रि, मन्त्रि, सभासद, सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरुले लाज पचाए ।
हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको खिल्ली उडाए । उदाहरणका लागी अमेरीका, भारत र चाईना आदि जस्ता मुलृुकहरुलाई प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक मुलुक भनिन्छ ।
जग्गाको भु–भाग, हेक्टर र जनसंख्या बढि भएका विशाल मुलुकहरु अमेरीका, भारत र चाईना आदि आदि जस्ता मुलुकहरुका लागि संघीयता उपयुक्त छ । तर हाम्रो मुलुक नेपालको जग्गाको भु–भाग, हेक्टर र जनसंख्या भारतको बिहार प्रान्त÷ राज्यको पटना जत्रो सानो आकारको छ । यसकारण हाम्रो मुलुकमा संद्यीयताको आवश्यकता छैन । संद्यीयता हाम्रो मुलुकका लागी घातक छ ।
हाम्रो मुलुकमा कानुन त छ तर कानुनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढि छ । कानुन भएर पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकै कारण अपराधिहरु खुलेआम घुमफिर गरिरहेका छन् । कारवाही र सजाय खोई ? राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारवाही र सजाय खोई ?
काठमाडौं हेटौंडा सुरुङमार्गका कार्यसमितीका तत्कालीन अध्यक्ष कुश कुमार जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट र अध्यक्ष लाल कृष्ण केसि ले सर्वसाधरण नागरीकहरुको सेयर लगानीलाई दुरुपयोग गरेका छन् कारवाही र सजाय .खोई ? दण्डहिनताको अन्त्य गरी कानुनी शासनको प्रत्याभुति र अनुभुति गराउने कसले ?
हाम्रो मुलुकमा पर्यटकहरुको आगमन बाट प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिने प्रवल बलियो पक्ष हो तर यसका लागी सुरक्षाकर्मीको कमि छ । नदि नालाहरु बाट पनि प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिन्छ । नदि नालहरु बाट पनि प्रशस्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा बिजुली बेच्ने हो भने प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ तर गर्ने कसले ?हाम्रो मुलुकमा सुन खानी, चाँदी खानी, फलाम (लोहा)को खानी, ग्यास र आयल निस्कने जस्ता दरो आय स्रोत आर्जन गर्ने ठाउँहरु छन् तर गर्ने कसले ?
एक्काईसौंं शताब्दीमा पनि आम नेपाली नागरीकहरुलाई जनचेतना र सचेतना नआएकोले हाम्रो मुलुकमा आर्थिक उन्नति र विकास नभएको हो । जुन मुलुकमा नागरकिहरु सचेत र जागरुक छन् । त्यस मुलुकमा आर्थिक उन्नति र विकास भई दिन प्रति दिन मुलुकले फड्को मारिरहेको अवस्था छ । हाम्रो मुलुकका नागरीकहरु सचेत र जागरुक नभएकोले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरुले आफु मन लाग्दो र मनपरी काम गर्दै नागरकिहरुलाई झुक्याई रहेका छन् । नेपाली नागरीकहरुमा जनचेतना, सचेतना र जागरुकताको कमी छ । यसकारण नेपाली नागरीकहरु सचेत र जागरुक हुन जरुरी रहेको छ ।
हाम्रो देश डुब्न लाग्यो नागरीकहरु लौ न बचाई देऊ । हाम्रो देश डुब्न लाग्यो सेनाहरु लौ न बचाई देऊ । हाम्रो देश डुब्न लाग्यो राजा लौ न बचाई देऊ ।